foza orana | GAZETY_ADALADALA
Posted on 15/04/2008 by gazetyavylavitra
be ny zavatra miova amin’izao fotoana.
Nilaza ny sampana mpandinika ny toetr’andro eto Madagasikara tamin’ny tatitra farany navoakany fa miovaova ny toetr’andro eto, fa tsy toy ny taloha intsony. Mihafoy ny fhavaratra ary mihamafy ny rivo-doza. Rehefa ho avy koa anefa ny orana dia hivatravatra fiavy. Izany rehetra izany dia tsy inona fa noho ny ataon’ny olombelona ihany. Tavy, doro tanety, fanimbàna tsy amim-piheverana ny àla, nefa ny fanoloana izay nongotana sy nadaboka tsy maharaka akory, mba tsy hitenenako hoe zàra raha misy. Tsy mahagaga araka izany raha ny toerana tsy noeritreretina hisy havandra no nahitana havandra (toy ny tany Andohan’Ilakaka), ary koa raha lehibe tsy araka izay fantatra ny haben’ireny havandra ireny (300 ka hatramin’ny 500gr ny vongany iray, ary tany Vohipeno aza dia 50 kg be izao ny iray). Be ny voly nadrasana ho masaka tsara no nampanenina ireo tompony, fa tao anatin’ny indray mipi-maso dia nafoy ho toy ny tsy nisy. Nahatratra hatrany amin’ny 20 cm ny haavon’ny havandra tamin’ny faritra maro nilatsahany. Ngoly ny vodi-mangahazo sy ny ovy ka dia be no simba, ny ravina fihinana moa dia tsy lazaina intsony.
Isan’ny antony koa ny tsy fiheverana efa fanaon’ny sasany toy ity nitranga tao Antanimena amin’ny andro antoandro be nanahary ity: nandoro ireo entany vita amin’ny plastika tsy nalain’ny tompony sy tsy nisy nividy ny tao amin’ny douane. Amin’ny andro mazava be izao, nefa feno olona mivezivezy sy mivarotra eo amin’ny manodidina eo. Tazana hatrany amin’ny kilometatra maro ny setroka mainty be niakatra avy tao. Ary efa niantsoan’ny olona mpamono afo avy ao Tsaralalana mihitsy aza fa noheverina ho trano may. Kay olona tsy ampy fiheverana no fototry ny olana. Mbola ialako tsiny foana ny teny mahitsihitsy fanaoko e!
Miovaova koa ny toe-tsaina fa raha ny Malagasy mpandàla aina sy tia anaka taloha no sainina, dia tsy izay no hita sy atrehina ankehitriny. Be ny fatin-jzazakely ariana etsy sy eroa, vokatry ny fanalàn-jaza. Voalaza mihitsy aza tamin’ny tatitra avy amin’ny FNUAP tamin’ny herinadnro fa i Madagasikara no voalohany indrindra manana tanora kely taona indrindra sy betsaka indrindra aty Afrika amin’ny fanaovana firaisana ara-nofo aloha loatra. Tsy ireharehana izany sanatria fa tena zavatra mahamenatra. Ny raiamandreny ve no efa tsy mahatontosa an-tsakany sy andavany intsony ny adidy , sa ny taranaka no diso manara-drenirano amin’ny resaka fanontoloana? Asa lahy! Ho aiza isika ity e? Gaga ianao mandeha eny an-dalana eny fa tsy lahy tsy vavy, ireny ny mpianatra Malagasy fa mba mipololotra amin’ny resaka sigara koa. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe: fa angaha moa izy ireny efa mikarama sa vola avy aiza no nividianana azy? Ary raha tsy mikarama sy tsy novidiana indray dia iza no nanome? Betsaka koa ny tovovavy ankehitriny no misy miantso amin’ny finday, dia any dia lasa izao.. Hainao angamba ny tiako hambara. Sao avy any àry ny vola e? Tsy haiko fa dia miovaova tokoa ny toe-tsaina fa izaho angamba no efa Ntaolo be tsy maharaka ilay toetr’andro miovaova ery ambony.
Mbola io resaka teo-tsaina io ihany dia izao no hitako; rehefa nisolo mpitantana ny tanàna iray, dia rava izay nataon’ny teo aloha. Ohatra amin’izany ny hatsaran-tarehin’Analakely teo aloha teo. Lasa nofinofy sisa. Ka iza ary no nanimba e? Ny niditra ve sa ny nivoaka? Na iza anefa na iza, dia izao fotsiny ihany; raha samy hiovaova teo-tsaina toy izany ihany, dia aleo zalahy mba miova ho tsara fa tena mamohehatra ilay itondran »ny sasany ny hoe fiovaovana a! Ho ahy, ho anao, ho antsika rehetra foana anie izay zavatra mipetraka sy vita eo e! Ary volanao no niasa teo nanamboarana azy ireny, sao odianao tsy fantatra ary izany! Io hetra hetra mampimenomenona ny maro io anie no mihodina any e! Koa tsy mandrora mitsilany ihany ve ireo miovaova toe-tsaina mankany amin’ny ratsy toy izany e!
Inoako fa hisy hahatsiaro ny lahatsoratro momba ny foza orana ny maro aminareo. Tamin’izany fotoana dia nentiko teto ny fomba fijerin’ny tantsaha eny Betsimitatatra momba azy io. Sy ny hoe « azo hanina….tsy azo hanina….sns…’ Nisy mihitsy aza hoy ireo tantsaha ny fanenjehana anay raha maka ireny izahay. Ankehitriny anefa dia nivoaka tamin’ny Fampitam-peom-pirenena (RNM) fa azo atao dia azo atao ny mihinana azy io ary tsy misy atahorana. Haingam-pitombo be io foza orana io, nefa nosakanana ny fampiasana azy sy ny fakàna azy. 300 ka hatramin’ny 1200 atody isan-taona no avoakan’ny iray aminy. Isan’ny ady amin’ny fampihenana azy anefa ny fakàna azy any anaty rano, nefa dia efa firy volana aty aoriana vao avela indray halain’ny olona ilay izy.
Tena miovaova marina izao rehetra izao, efa tokony ho ririnina ny vaninandro eto Madagasikara amin’izao fotoana, nefa dia aleo lazaina fa tena mandoro ny hafanana. Lazain’ireo mpandinika azy io aza fa amin’ny taona 2050 dia hiampy 2.6°C ny hafanana ho an’i Madagasikara manokana.
Am-bava homana, am-po mierotra, ary tady atsipy an-tandrok’omby izy ity ry zalahy, teny alefa ho am-pon’ny mahalala. Diniho ihany izay aleha sy atao.
Filed under: fiaraha-monina, tapatapany, toetr'andro | Tagged: foza orana, miovaova, toe-tsaina, toetr'andro |	Leave a comment »
Filed under: tapatapany | Tagged: Betsimitatatra, foza orana, procambarus, voly vary |	13 Comments »